Steak chinois - Recette de cuisine Malagasy de Madagascar
par Gaël RAKOTOVAO	 9 novembre 2016
Raha mbola tsy manana idée atao laoka ity misy steak chinois. Sady ankafizin’ny ankizy ny steak ampiarahina amin’ny frites na pates.
Fotoana hikarakarana azy: 1h 15 mn
Fécule de manioc,
steak chinois avec du riz blanc et vinaigrette de tomate
Fomba fikarakarana Steak chinois
Fisahana ny nofo-kena ary kapokapohana amin’ny vodiny antsy be na rouleau hamakiana ny fibres.
Lomana ail sy gingembre sy sauce soja sy sel sy poivre sy huile sy fecule de manioc sy 4 epices mandritra ny adiny 1h na mihoatra.
Endasina tsy asiana menaka intsony ary tsy atao mendy be.
Tsy ataorana iraikitra ny fécule de manioc na endasina tsisy menaka aza satria efa misy huile ny macération.
steak haché mariné sauce soja
beefsteak chinois, laoka malagasy, recette steak boeuf chinoise, steak chinoise recette, steak haché mariné sauce soja
Article précédent : Rent 501, la référence en Raid en quad à Madagascar
Steak panéArticle suivant :